Casharrada Qoob -ka -ciyaarka Arooska | Qoob-ka-ciyaarka Koowaad, Qoob-ka-ciyaarka Hooyo, Qoob-ka-ciyaarka Aabaha
Fred Astaire Dance Studios - ARDAY CUSUB GAAR AH
Ardayga Cusub ee Gaarka ah
Faa'iidooyinka Qoob -ka -ciyaarka
4 tiir oo qoob ka ciyaar ah
Su'aasha Casharka Qoob -ka -ciyaarka
Hababka Wax Barista
Casharrada onlaynka ah
Casharrada Carruurta & Dhalinyarada
Casharrada Qoob -ka -ciyaarka ee Para
Qiima dhimis Milatari
Noocyada Qoob -ka -ciyaarka
Waa maxay sababta FADS?
Golaha Dheesha Int'l
Mudane Fred Astaire
Wararka & Saxaafadda
Dhaqdhaqaaqa Maaskarada Milyan ™
Horyaalada Caalamiga ah
Blog & Bulsho
Blog Qoob ka ciyaarka
Madal Casharrada Online -ka ah
Macluumaadka Casharrada Internetka
Casharrada Socodka Gaarka ah
Nidaamka Trophy Online
Barnaamijyada Qoob -ka -ciyaarka Arooska
Xusuusta Qoob -ka -ciyaarka Arooska ee socon doonta Nolol…
Waan ognahay sida ay muhiim u tahay Maalinta Arooskaaga, waxaana kaa caawin karnaa inaan ka dhigno mid gaar ah! Istuudiyaha Qoob -ka -ciyaarka ee Fred Astaire, waxaan kuu habaynaynaa Barnaamijyadeena Barashada Qoob -ka -ciyaarka Arooska adiga uun, si aan kuu siino kalsooni iyo xirfado labadaba si aad u muujiso haybadaada, qaabkaaga - iyo laga yaabee xitaa shaqsiyad yar oo ku taal dabaqa qoob -ka -ciyaarka, maalinta arooskaaga. Waxaan kaa caawin doonaa inaad abuurto “Qoob -ka -ciyaarka Koowaad” oo gaar ah oo gebi ahaanba ah “ADIGA” - noqo mid xarrago leh, casri ah ama madadaalo caadi ah. La yaab qoyskaaga iyo asxaabtaada xirfadahaaga qoob-ka-ciyaarka ee cusub, oo ku raaxayso xusuusta arooska sixirka ah oo adigaa iska leh.
Wac maanta, oo aan ka hadalno qoob -ka -ciyaarka arooska riyadaada!
Maalinta Arooskaaga Ciyaarta Koowaad
Qoob -ka -ciyaarkaaga Koowaad waa muujinta weligeed ah ee jaceylkaaga iyo ballanqaadkaaga - adiga iyo xaaskaaga cusub, iyo sidoo kale martida gaarka ah ee kula dabaaldegeysa. Laga soo bilaabo dhowr tallaabo oo fudud si loo gaadho jadwal dhammaystiran, waxaan kaa caawin karnaa in dheeshaada ugu horreysa ay noqoto mid gaar ah sida maalinta arooska intiisa kale.
Aabaha/Gabadha & Hooyada/Wiilka Ciyaar
Qoob -ka -ciyaarka Aabaha/Gabadha iyo Hooyada/Wiilka waa qoob -ka -ciyaar cajiib ah oo ku habboon dheeshaada Koowaad. Ka mid noqoshada waalidkaa (ama saaxiibada gaarka ah ama xubnaha qoyska ee istaagi doona doorka dhaqankaas) qoob ka ciyaarka arooska waa hab cajiib ah oo lagu muujiyo jaceylkaaga iyo qadarintaada. Waxaan ku talin lahayn inaan sidoo kale jadwal u dhigno dhowr casharro qoob -ka -ciyaarka arooska ah iyaga.
Jadwalka Qoob -ka -ciyaarka ee Arooska
Raadinta wax runtii xusuus mudan? Waxaan ku dhejin karnaa qoob-ka-ciyaar “YouTube-u-qalma” qoob-ka-ciyaarka xafladda arooska oo dhan, taas ayaa lagu wadaa muusigga aad ugu jeceshahay! Kordhi daqiiqadaha maalinta arooska gaarka ah leh caado aad u fiican oo aad rabto inaad dib u noolaato, mar labaad iyo mar kale.
Maalintaada, Khibradaada Qoob -ka -ciyaarka Arooska
Waqti yar gudahood, Macallimiinteena qoob -ka -ciyaarka ee shahaadaysan ayaa kaa caawin kara inaad barato dhowr tallaabo oo aasaasi ah, markaa waxaad dareemi doontaa xasillooni iyo kalsooni maalinta arooskaaga. Maankaaga wax ka weyn? Waxaan ku dhejin karnaa qoob -ka -ciyaarka oo dhan - xitaa ku dar xafladda arooska! Ma jiraan xeerar adag oo degdeg ah - markaa adiga ayaa go'aan ka gaaraya qorshaha. Waxaan kugula talineynaa in aad jadwalkaaga jadwal u dhigto ugu yaraan hal bil ka hor xafladda (iyo in ka sii horreysa, si aad u hesho waxqabadyo badan oo ku lug leh) markaa na soo wac maanta si aan ula tashanno. Soo qaado heesta aad ugu jeceshahay, sawirada goobtaada, labiska arooska ... wax kasta oo aad jeceshahay inaad wadaagto, si ay nooga caawiso inaan riyadaada ka dhigno mid dhab ah.
Ku raaxayso Waddada Maalinta Arooska!
Casharrada qoob -ka -ciyaarka aroosku waa hab fiican oo lagu madadaasho oo lagu nasto ka hor Maalinta Weyn. Iyada oo leh dhammaan go'aammada, jadwalka iyo waqtiyada kama dambaysta ah ee ku lug leh qorshaynta arooska, ku wada raaxaysiga waqtigan oo kaliya adiga ayaa kaa caawin kara inaad walbahaarka iyo dib-u-kicinta labadaba-waxaanan ballan-qaadaynaa inaad yeelan doonto madadaalo badan oo aad samayso! Nala soo xiriir maanta, oo qof kasta oo arooskaaga ah qoob ka ciyaar si aad u xasuusato.
Ku Samee Qoob -ka -ciyaar Qurux Badan Jacaylkaaga, Maalinta Arooskaaga!
Ku raaxayso fiidiyowyada Qoob -ka -ciyaarka Koowaad oo ay wadaagaan lamaanayaasha ardaydu, oo sawir labadiinna oo ay ku hareereysan yihiin qoys & saaxiibbo maalintaada gaarka ah…
Foxtrot iyo Country Western Laba Talaabo Qoob -ka -ciyaarka Koowaad, Casharrada uu qoray Fred Astaire Studios Dance - Waqooyiga Phoenix
Foxtrot Qoob -ka -ciyaarka Koowaad, Casharrada & Laxanka waxaa qoray Fred Astaire Studios Dance - Waqooyiga Phoenix
Waltz First Dance, Casharrada uu qoray Fred Astaire Studios Studios
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Duruusta Qoob -ka -ciyaarka
S: Maxay tahay sababta aniga iyo gabadha aan guursanayno u qaadaneyno casharrada Qoob -ka -ciyaarka Arooska?
J: Xaflad ilaa soo dhaweyn, maalinta arooskaagu waa dabbaaldegga jaceylka aad isu qabtaan. Wax kasta oo aad qorshaynayso - goobta, ubaxa, labiska, cuntada, muusigga, iyo in ka badanba waxay ka tarjumi doonaan qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada, qoob -ka -ciyaarkaaga Koowaadna waa inuu ahaadaa, sidoo kale! Lamaane badan, si kastaba ha ahaatee, Qoob-ka-ciyaarka Koowaad wuxuu u noqon karaa waayo-aragnimo dareemeysa. Laakiin waxyar uun ka dib casharrada Qoob -ka -ciyaarka Arooska ee Fred Astaire Dance Studios, waxaad yeelan doontaa xirfado iyo kalsooni aad ku martiqaado martidaada qoob -ka -ciyaarka oo aad ku abuurto xusuus gaar ah oo aad had iyo jeer qaddarin doonto. Casharrada Qoob -ka -ciyaarka Aroosku sidoo kale waa hab fiican oo lagu madadaasho oo lagu nasto ka hor Maalinta Weyn. Ka feker sida "habeenada taariikhda"! Iyada oo leh dhammaan go'aammada iyo waqtiyada kama dambaysta ah ee ku lug leh qorshaynta arooska, wada-raaxaysiga waqtigan ayaa kaa caawin kara inaad walbahaarka iyo dib-u-kicinta labadaba, waxaanan dammaanad-qaadaynaa inaad lahaan doonto DHAQAN madadaalo leh.
S: Sidee u shaqeeyaan barnaamijyada qoob -ka -ciyaarka Aroosku?
J: Istuudiyaha Qoob -ka -ciyaarka ee Fred Astaire, barnaamijyadeena Qoob -ka -ciyaarka Arooska adiga ayaa laguu habeeyay - qaabkaaga & shakhsiyaddaada, iyo mudnaantaada muusigga iyo doorashada qoob -ka -ciyaarka. Macallimiinteena Qoob-ka-ciyaarka ee saaxiibtinimo leh, oo shahaado haysta ayaa wax walba bari kara dhowr tallaabo oo qoob-ka-ciyaarka ah oo fudud ilaa hab-dhismeed dhammaystiran oo loogu talagalay xafladda arooskaaga oo dhan-adiga ayaa iska leh!
S: Goorma ayay tahay waqtiga ugu fiican ee la bilaabi karo u diyaargarowga dheeshayada ugu horreysa?
J: Haddaad tan hadda akhrinaysid, waxay u badan tahay inay tahay waqtigii aad bilaabi lahayd maxaa yeelay inta aad sugto, waxaa yaraanaya waqtiga aad ku abuuri karto riyadaada Arooska riyadaada! Sababtoo ah jadwalka caadiga ah ee lamaanayaasha arooska, waxaan kugula talineynaa inaad bilowdo ugu yaraan 5-6 bilood kahor arooskaaga. Tani waxay ku siin doontaa waqti badan jadwalka jadwalka (adiga, iyo laga yaabee waalidkaaga iyo xafladda arooska), iyo inaad si dhab ah kalsooni ugu dareento dheeshaada. Dabcan, waxaan caawin karnaa lammaanaha waqti yar haysta, sidoo kale. Ha dib u dhigin - nala soo xiriir maanta si aad u bilowdo.
S: Sideen ku bilownaa?
J: Wax walba waxay ku bilowdaan wadatashi bilaash ah oo ka socda Fred Astaire Dance Studios. Waan ka wada hadli doonnaa qorshooyinkaaga, oo aan wax badan ka baran doonaa riyadaada Qoob -ka -ciyaarka Arooska. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad keento heesaha aad jeceshahay, sawirrada goobta & labiskaaga arooska, tusaalooyinka fiidiyowyada qoob -ka -ciyaarka ee aad jeceshahay, iwm taasi waxay la yaabi doontaa martidaada waxayna ka dhigi doontaa arooskaaga mid gaar ah.
S: Waa imisa casharrada Qoob -ka -ciyaarka Aroosku?
J: Waxaan bixinnaa xirmooyin hordhac ah oo gaar ah oo kaa caawinaya inaad abuurto riyo Qoob -ka -ciyaarka Arooska oo qiimo weyn leh. Intaas wixii dhaafsiisan, waxaan diyaarin doonnaa barnaamij si loo gaaro ujeeddooyinkaaga gaarka ah iyo miisaaniyaddaada. Casharada labadiinnu kaliya haysataa waxay ka koobnaan karaan dhawr tallaabo oo qoob-ka-ciyaarka ah oo fudud ilaa qoob-ka-ciyaar buuxa. Waxaan ku dari karnaa xafladda arooskaaga, si aad u hesho jadwal u qalma YouTube. Oo ay ku jiraan waalidkaaga (ama saaxiibo gaar ah ama xubnaha qoyska kuwaas oo istaagi doona doorkaas dhaqameed) Qoob -ka -ciyaarkaaga Arooska waxay noqon kartaa hab cajiib ah oo lagu muujiyo jacaylkaaga iyo qaddarintaada. Gebi ahaanba adiga ayay kugu xiran tahay!
S: Ma ka qayb geli karnaa xafladda arooskayaga?
J: Runtii! Maalmahan, lamaanayaal aad iyo aad u badan ayaa ku daraya xafladda arooskooda casharrada qoob -ka -ciyaarka - si ay u abuuraan cayaaro qoob -ka -ciyaar oo gaar ah, ama xitaa dib uga abuuraan goob qoob -ka -cayaar oo caan ah filimka aad jeceshahay, muusikada ama fiidiyaha! Qoob-ka-ciyaarka Koowaad ee YouTube-ka u-qalma wuxuu u noqon karaa lama-filaan-joojinta saaxiibbadaa iyo qoyskaaga, waxayna noqon doontaa daqiiqado aad dhammaantiin doonaysaan inaad dib u daawataan, marar badan iyo mar kale.
S: Ma siisaa casharo waalidiinta lammaanaha arooska ah?
J: Haa! Ka mid noqoshada waalidkaa (ama saaxiibbadaada ama xubnaha qoyskaaga ee istaagi doona doorkaas) qoob -ka -ciyaarkaaga arooska waxay ka dhigi kartaa waqtigaaga qoob -ka -ciyaarka mid gaar ah, waana muujinta jacaylkaaga iyo qaddarinta aad u qabto. In kasta oo ahmiyadda iyo mudnaanta koowaad ay noqon doonto Qoob -ka -ciyaarkaaga Koowaad, waxaan u soo jeedinaynaa waalidiinta dhowr cashar haddii aad qorsheyneyso inaad soo bandhigto qoob -ka -ciyaarka gaarka ah ee Hooyo/Wiil iyo Aabbe/Gabadh inta lagu jiro soo dhoweyntaada.
S: Maxaan u xirnaa casharada qoob -ka -ciyaarka?
J: Waxaan ogsoonahay in Ardayda qaarkood ay si toos ah u yimaadaan casharrada xafiiska, qaar kalena ay si caadi ah ugu labbisan karaan casharrada - midkoodna waa fiican yahay. Waxa ugu muhiimsan waa inaad xirato wax raaxo leh, oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u dhaqaaqdo. Dabcan, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad xulato kabo raaxo leh. Waxaan u soo jeedineynaa kabo maqaar-u-gaar ah mudanayaal, iyo kabo dhabarka u leh marwooyinka (oo la mid ah waxa aad xiran karto si aad qoob-ka-cayaarka u baxdo). Haddii aad hore u iibsatay kabahaaga arooska, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad u soo qaadato casharkaaga koowaad, si aan kaaga caawino inaad go'aansato haddii aad awoodi doonto inaad si raaxo leh ugu dhex dheesho. Fadlan ogow in kabaha cayaaruhu aysan si fiican ugu shaqaynayn dabaqa qoob -ka -ciyaarka maxaa yeelay way dheggan yihiin, taasoo adkeyneysa inaad dhaqaajiso cagahaaga.
S: Ma inaan casharada Qoob -ka -ciyaarka ku qaataa kabaha arooskayga?
J: In kasta oo kabaha aroosku yihiin qalab qurux badan oo loogu talagalay labiskaaga arooska, had iyo jeer looma habayn raaxada ama dhaqdhaqaaqa. Waxaan kugula talineynaa inaad u keento kabahaaga arooska casharkaaga qoob -ka -ciyaarka ee ugu horreeya, sidaa darteed Macallinkaaga Studio -ga qoob -ka -ciyaarka ee Fred Astaire ayaa kaa caawin kara inaad go'aamiso haddii aad si raaxo leh ugu dhex dheeli kartid, ama haddii ay tahay inaad tixgelisid kabo qoob -ka -ciyaar oo qoob -ka -cayaar ah oo loogu talagalay Qoob -ka -ciyaarka Koowaad iyo soo dhaweynta . Asxaabtaada iyo qoyskaaga xitaa ma dareemi doonaan bedelka - laakiin waxaad noqon doontaa mid aad u raaxo badan!
S: Imisa cashar oo Qoob -ka -ciyaarka Arooska ah ayaan u baahan doonaa?
J: Tirada casharrada aad rabto inaad qaadato waxay ku xiran tahay nooca Qoob -ka -ciyaarka Koowaad ee aad rabto inaad abuurto. Macallimiinteena shahaado haysta iyo Fred Astaire Dance Studios 'habka la xaqiijiyay ee waxbaridda waxay hubiyaan inaad baran doontid inta ugu badan ee suurtogalka ah, waqtiga ugu gaaban, oo leh haynta ugu badan, iyo xiisaha badan. Waxaan kaala shaqeyneynaa sidii aan u abuuri lahayn Qoob -ka -ciyaarka Koowaad oo ku habboon aragtidaada, xaddiga waqtiga aad heli karto. Waxaan dammaanad qaadi karnaa inaad dareemi doonto kalsooni iyo raaxo maalinta arooskaaga. Xaqiiqdii, waxaad u socon doontaa qoob -ka -ciyaar kalsooni leh dhammaadka casharkaaga ugu horreeya!
S: Miyaan ka mas'uul nahay xulashada muusiggeena?
J: Maya. Haddii aad maskaxda ku hayso hees gaar ah, hubaal nala soo socodsii si aan kaaga caawino xulashada qoob -ka -ciyaar si fiican u habboon - laakiin looma baahna. Dhab ahaantii, marka lagu baro hababka kala duwan ee qoob -ka -ciyaarka lamaanaha, waxaa laga yaabaa inaad ogaato inaad si dhab ah u jeceshahay qaabka qoob -ka -ciyaarka ee aan ku habboonayn muusiggaaga! Wax kasta oo aad go'aansato, waxaan u joogi doonnaa inaan kaa caawino ka dhigista Qoob -ka -ciyaarka Koowaad mid dhammaystiran “adiga”.
S: Waa maxay qoob -ka -ciyaarka loo isticmaalo heesaha qoob -ka -ciyaarka arooska?
J: Istuudiyaha Qoob -ka -ciyaarka ee Fred Astaire, waxaan khubaro ku nahay dhammaan qaababka qoob -ka -ciyaarka - waxaanna ku dari karnaa mid kasta (ama in ka badan!) Oo ka mid ah heesahaaga Qoob -ka -ciyaarka Arooska. Laga soo bilaabo Waltz-ka caadiga ah ama Foxtrot ama Tango sultry, ilaa Madadaalo & Dal-ku-noolaansho Dal-Galbeedka Laba-tallaabo iyo ka badan, Macallimiinteena qoob-ka-ciyaarka ee shahaadaysan ayaa ku caawin kara!
Eeg dhammaan Goobaha
Waa maxay sababta loo doorto Fred Astaire?
Casharrada Arooska ee Internetka!
Xuquuqda daabacaadda © 2021 Fred Astaire Dance Studios Shuruudaha Adeegga
Naga caawi inaan helno istuudiyaha kuu dhow! Goobahayaga ugu dhow ayaa ka muuqan doona bogga natiijooyinka raadinta.
* waxay tilmaamaysaa beer loo baahan yahay